Kushungurudzwa kwepabonde - vatadzi, vanoziva zviratidzo uye zvimwe zvinenge zvichiitwa
Kushungurudzwa Zvepabonde - Kudzivirirwa uye Zviratidzo | dzidzo
Dambudziko uye mubairo - kurukurai nzira dzomutadzi nevana
Nzira yekudzivirira vana sei pakurwiswa kwepabonde paInternet?
Zvinonzi kuchengetedzwa kweInternet
Kunoshungurudzwa kwepabonde kwevana nevechiri kuyaruka kunotangira kupi?
Zviratidzo zvekushandisa zvepabonde
Chii chaunofanira kuita kana mwana wako ari kushungurudzwa zvepabonde?
Chii chaunofanira kuita kana pane kusava nechokwadi
Vabereki vose vanoda kuchengetedza vana vavo zvakanyanyisa kubva kune chisimba uye kushungurudzwa kwepabonde. Asi ndiani angakurukura nyaya iyi nevana zvachose? Uye chii chaicho chinonyevera mwana wake kunyanya? Izvi zvakakosha here kuzivisa tsanangudzo dzose kana kuti pane mitemo mitemo yekudzivirira mwana kubva mukurwiswa kwepabonde? Tichifunga nezvekuti vatadzi vanowanzova nhengo dzemhuri, nyaya yekushungurudzwa kwepabonde yakanyanya kuoma uye inofanira kutarisana nekunakisisa. Zvakakosha kutaurira mwana kuti nechinetso chese uye nekutya nguva dzose kunouya kuvabereki.
Kushungurudzwa kwepabonde - kudzivirirwa kuburikidza nekuzviremekedza kwakasimba
Vana vanozvivimba havakwanisi kuitirwa utsotsi hwepabonde. Nzira yekudzivirira yeanokanganisa inoita kunge yakakwirira pano, sezvo inotya kuti mwana anogona kuzvidzivirira kana kutarisa kushungurudzwa kumba. Saka zvakakosha kupa mwana wako zvakanakisisa kuzvimiririra uye kuzviisa kune zvaanoda zvemuviri uye kuvaremekedza. Izvi zvinotanga nababamunini kutsvoda, izvo mwana anoramba. Usambogunzwa kana kukanganiswa, izvo zvinoita kuti mwana asanetseka.
Rega mwana kushungurudzwa
A "Izvozvo hazvina kunaka, zvikwanise pamwe chete, zvisinei kuti babamunini vanonyombwa" ibhedha iyo mbeu yemhosva inowedzera munguva yemberi. Nokuti kunyange kunyange iye anogona kushandisa zviratidzo zvakadaro kutamisa mwana kune zvinhu zvaasingadi. Izvo zvinoda mwana uye izvo zvisingaiti, zvinosarudza icho pachacho. Zvinodawo ushingi kutaura kuti munhu haadi kushungurudzwa nainini. Nokuda kweizvi vana vanoda kuzvidzora uye kunzwa kwekukwanisa kubata nemuviri wavo.
Mwana wako nani anonyara uye yakachengeterwa, unogona kusimbisa chivimbo chake chinokosha mapoka. Available nhasi mune zvinenge guta rimwe nerimwe, kunyange kuzvidzivirira kuti kukireshi vana kupa mamwe masangano. Izvi hazvirevi izvozvo, kuti mwana kukireshi aigona kuzvidzivirira mukuru zvinobudirira kudzivirira, asi zivo kuti mwana anowana izvozvo zvinoita nechivimbo uye vakashinga - uye akachiunza saka kubva rechipfuwo basa.
Kudzivirira kusununguka uye dzidzo!
Ukama hwakanaka nemwana wako ndiyo alpha uye omega yekuita kuti mwana wako ave nechivimbo kwauri iwe paanenge achida. Zvichiitika, iwe unofanira kujekesa mwana wako maererano nehutano, hurikadzi uye pasina nyadzi. Nhau nenyuchi nemaruva maduku zvakapera.
Mwana anogona kungotaura zita raanoziva. Saka ivai saruka sezvinobvira, ipai nhengo dzose dzemiviri mazita akakodzera uye musatya kupindura mibvunzo yemwana wenyu nokutendeseka.
Kana mwana wako achikumbira - uye ichakumbira, sezvo vana vose vanobva kune imwe nguva vane hanya! - Apo vana vanobva, vaudze kwaari sevasaruri kusarura uye bvisa gorogiro kunze. Ikozvino kune mabhuku anojekesa mabhuku uye mapepati anobatsira vabereki kuti vararame zvepabonde vasina kuvhiringidzika.
Elementary age vana vanofanira kuziva kuti kushungurudzwa kwepabonde chii. Tsanangurai kumwana wenyu zvakajeka sezvinobvira uye musatya kuti kushungurudzwa kwepabonde kunowanzoitika zvakare. Ichokwadi kuti isimboti inofamba pakati pekunyevera nekuzvidya mwoyo.
Saka, zvakakosha kuti iwewo uudze mwana wako: izvo zviriko, asi hazviwanzoitika. Asi kana zvichiitika, iwe unofanira kutaura pamusoro pazvo. Nzira yakakurumbira yevatadzi ndeyokunyaradza mwana. Achaita zvingangovhundutsa kana kuedza kuvhiringidza mwana. Kana anoita zvivimbiso uye anopa mubayiro mwana wacho nokuda kwekunyarara kwake. Izvozvo zvakare, mwana wako anofanira kuziva. Avo vanoziva nzira idzi vachawana zvakare zviri nyore kuziva kana kushungurudzwa kwepabonde kunotanga uye kunogona kuzvidzivirira pachavo.
Nokuti kazhinji kushungurudzwa kwepabonde kunotanga kukwira uye kwete kubva kune imwe yechipiri kune imwe. Mumwe mutadzi anonzwa nzira yake mberi nekufamba kwenguva mimwe miganhu. Saka ukurudzira mwana wako kuti ataure pakarepo pamusoro pechinhu chipi nechipi chisinganyaradzi kwaari, kunyange kana chichityisidzirwa. Inofanira kuziva kuti inogona kuchengetedzwa chete kana ichitaura nezvayo.
Mukuwedzera kune zviduku zviduku, Indaneti inopawo mhosva dzepabonde dzinoita kuti ive nzvimbo itsva. Iyi imba inofanira kunyatsoonekwa seyoyi nevabereki.
Kudzivirirwa pakunetswa kwepabonde paIndaneti
Kuipa Kwemhosva: Indaneti iri pachayo inofanirwa zvakanakisisa kuti irambe isingazivikanwi, nokuti ine chimwe chinhu chakagadzirirwa, icho hupenyu chaihwo hahugone kuita: zvachose kusingazivi uye hapana zvapupu. Nokudaro, kunyanya iyi mamiriro matsva emhosva anozivikanwa zvikuru.
Zvinosuruvarisa, vana, avo vasingazivikanwi nemitemo yenyika itsva iyi, ndivo avo vanotambura zvikuru. Nenguva isipi, pane mitemo miviri inokosha inobvumira kunyange muduku kuna vose kuti aende zvakanaka munyika yewebhu.
Kusanzwisisika kwevanokanganisa nekusununguka kwevakatambura
Vanokanganisa vanogona nyore kuwana mifananidzo, e-mail adresses, nhamba dzefoni uye kunyange mazita evanhu avo vari paIndaneti. Sezvo vana nevechiri kuyaruka vanowanzotumira pachena pamapepanhau anozivikanwa zvikuru, ndiwo mutambo wevana kwavari uye saka ruzivo rwega harusi kurangwa. Nguva zhinji, avo vanoita zvakaipa vanoshandisa ruzivo urwu kuti vataure nevanovhiringidzwa, kazhinji vanozviita vaduku kupfuura ivo, uye vanotsausa zvinodiwa zvinowanzodiwa. Dzimwe nguva zvinowanzotaurirawo makamuri kana mapurisa ehurumende, kuburikidza nekutarisana kwekutanga kunoitika. Mune maforamu aya, vechidiki vane zvinodiwa zvinowanzobatana (semuenzaniso, mazita apo vanhu vechidiki vanogona kutumira nyaya dzavo, izvo zvinozoverengerwa), kuitira kuti kuonana navo pamusoro pekugovana kwekugovana kunotonyanya kuonekwa. Mutadzi wacho anowanzoshandisa purogiramu yakaipa, izvo zvinoreva kuti denga rake (zuva rokuberekwa, nzvimbo yekugara, chikoro chemhuri) hazvienderani nezvakataurwa sezvataurwa pamusoro apa.
Dambudziko nderokuti vana vakawanda nevechiri kuyaruka vanonzwa vakachengetedzwa mumasvingo avo mana. Nyika pomumbure riri rakapotsa, saka ngozi sokuti chete rakapotsa uye kuwana nzira yavo chokwadi. Asi kushandiswa kwepabonde kunotanga rini? Hazviiti nguva dzose kumusangano pamwe nemunhu anenge atadza kutaura pamusoro pekushandisa zvepabonde. Tumirai zvimwe vanopara vanoitirwa mifananidzo nevavariro pabonde kana mafirimu zvepabonde kugutsikana - izvo pachazvo mhosva nokuti unogona mwana, muduku uye asina ruzivo, zviri anovhiringidza uye zvinotyisa. Uyewo mafiripi asina kunaka kana chikumbiro chekutumira mifananidzo ivo pachavo vane mhosva dzepabonde.
Kushungurudzwa kwepabonde pabasa hakusi kukanganisa
Iyo yakakwana yega yekuvhara zvakachengeteka - Mazano evana
Izvo zvinonyanya kukosha kusingazivikanwi. Usatumira kero yako kana nhamba yefoni paIndaneti. Usambotumira deta yako kumunhu asingazivi, rega kuverenga nyaya kana mhuri yemifananidzo. Kana ukashandisa zita rekudanwa, harifaniri kunge rine zita rako rechokwadi kana kuratidza makore ako, zvakadai seLisa99. Kubva pane izvi, mutadzi anogona kugumisa kuti Lisa akaberekwa mugore re xxxx. Shandisa nhamba dzakawanda uye mazita. Pamapeji akaita sa Facebook iwe unoona zvakawanda kana iwe usingaiti yako pikicha. Iva nechokwadi chekuti mufananidzo hausi kukoka kune vanoita zvepabonde vanotungamirirwa.
Chokwadi chaicho pamusoro pechimwe nzvimbo. Mambure inzvimbo, nzvimbo isina mitsara uye ine mikana isina kukwana. Zvose zvinoshamisika pano: kubva kune shamwari yakanaka pamusoro pevadariki vashoma kumubhangi webhangi nemwana molester. Kazhinji vatadzi vakaipa vanopfeka nenguo isina mhosva. Ngwarira kuti hakuna shamwari chaiyo mushure mekutaura kwose kwakanaka.
Kana ukawana chimwe chinhu chinonakidza, taura nevabereki vako nezvazvo. Usaedza kuedza kuita chimwe chinhu chausingadi. Pamwe mifananidzo uye nhamba dzenhare pamwe chete nevatambi vekufambisa hazvisi mumaoko emavasingazivi.
Ngwarira kuti vanhu chaivo vanovanza mushure mezvinyorwa zvese. Haasi munhu wose shamwari - uye kana MickeyMouse17 inonyatsonaka munhu ane izwi rakanakisisa raanoti ndeye rinopokana.
Kwete misangano neveIndaneti shamwari. Usamboonana neshamwari iwe chete unoziva kubva paIndaneti. Pano pane imwe yenjodzi huru. Usapindura kune mikoti yemhando iyi! Pane zvinopesana: Kana iwe uchinzwa kushamisa, iwe unofanira kunge uchitaura zvino purogiramu iyi kumukuru we forum. Izvo zvinoshandawo kune nyaya iyo mumwe munhu akakurongai nehupenyu hwehupombwe, ivai mavhidhiyo, mapikicha kana magwaro ane mazano akakodzera. Munhu anenge aita nzvimbo yacho anogona kubva aita mapurisa.
Chero ani anotenda kuti kushungurudzwa kwepabonde kwevana nevechiri kuyaruka kunongotanga kana zvasvika kune imwe nzira yepabonde yekutengesa hazvina kururama. Asi kunonyadzisa kupi zvepabonde kana kushungurudzwa kwepabonde kunotanga? Zviri pachena kuti iwe haugoni kutora muganhu uyu zvakajeka. Zvisinei, chero chinhu chinopesana nekuremekedza uye kuda kwomwana zvakajeka chiito chemhosva.
Kudzivirira kurwiswa kwepabonde kwevana
Neyo tsanangudzo, izvi zvinogona kunge zviri kutarisa zvakajeka kana mazwi anonyadzisa. Sangano redu rakapfuura-rinokurudzirwa panyaya iyi, iyo inofadza zvikuru kune rumwe rutivi, uye munhu wese anoshanda mumasangano ezvidzidzo anotarisira. Asi iyo inotungamirirawo kune chokwadi chokuti kazhinji vanababa vanowedzera kuvhara nevana vavo, kuitira kuti varege kuita chero chakaipa.
Kushungurudzwa pabonde mune zviratidzo zvayo
Pakutanga kushungurudzwa. Mumakamuri emakamuri kana maforamu vana kana vechidiki vanotumirwa mavhidhiyo kana mapikicha ane zvinyorwa zvinonyadzisa. Dzimwe nguva vanobvunzwa kuita zvepabonde ivo pachavo, kunyanya kuburikidza ne Skype, saka mutadzi anogona kuvatarisa. Mamwe maitiro ekudzvinyirira anosanganisira kukwidza mumugwagwa kana kuti kugadzirisa mashoko ehupombwe akajeka uye zviri mukati.
Danho rinotevera riri kubata mwana. Muchiiti anoda kuti agunzwe nemwana ari munzvimbo yepagichu, anozvibata iye pachake kana kuti anokurudzira kuti azvibate uye amurege achimuona. Kubata kunogona kutungamirira mukubata uye / kana kusanganisira zvimwe zvose zvepabonde. Ichokwadi kuti vana vanoona zvinonyadzisira zvakare chikamu chekushungurudzwa kwepabonde kwevana nevechiri kuyaruka. Pano, mwana wacho anomanikidzika kubvisa uye kufema firimu uye kutora mufananidzo. Dzimwe nguva zvinomanikidzwawo kutarisa mifananidzo yekuona zvinonyadzisira uye mafirimu kana kutarisa maitiro evamwe. Mhando dzekushungurudzwa kwepabonde dzakasiyana zvakasiyana nemafungiro evhudzi hwevanoita!
Sei zvisinganyanyi kuratidzwa?
Izvo zvisiri pasi zvekushungurudzwa kwepabonde zvinotyisa zvikuru. Izvi zvinokonzerwa nekuziva kuti vatambudzi vanowanzobva kumamiriro emwana. Muzviitiko zvakawanda, zvinosuruvarisa kuti nhengo dzemhuri dzinoshandisa simba ravo pamusoro pemwana. Mwana ari muukama hwekuvimba, mupfungwa uye mumuviri, uye haagoni kurwisa kurwisa kwepabonde kwenguva refu. Kunyange kana ikasarudza kutaura kune mumwe munhu mukuru mumhuri, kazhinji haisi kutungamirira mapurisa. Ichokwadi ndechokuti, pedyo nechecheche kune mutambudzi, zvishoma ndezvokuti mhosva yacho ichazoendeswa uye inotorwa kudare. Ichokwadi ndechekuti ichiri kunyanya vasikana ndivo vanopomerwa mhosva yemhosva. Varume vanokanganisa vanowanzouya kubva kumhepo yakatarisana kana kuti avo vanowirirana navo.
Sezvo vakaurayiwa vari kunyarara kwenguva yakareba, zvakaoma chaizvo kuona kushungurudzwa kwepabonde. Anowanzozivikanwa kana yakanyanyisa uye kare zviratidzo zvepfungwa kana muviri zvakaitika. Kune huwandu hwezviratidzo zvinogona kuratidza kushungurudzwa kwepabonde, asi hazvirevi kuti zvinoratidza.
Ndezvipi zviratidzo zvekushandisa zvepabonde?
Kunyanya nyaya ino, vakawanda kuzeza, nokusingaperi uimbe nokufungirana nokuda Chokwadi mumwe kazhinji anofanira kurwa zvisina kururama mhosva kwoupenyu hwose pamwe mhosva uye kazhinji haana rehabilitated zvakare chaizvoizvo. Zvisinei, izvozvo zvinogona chete kuva nekuti zvakafunga vakaurayiwa kutaura kamwe panzvimbo chifungidziro kupfuura zvisina kufanira akafuratira, kutambura vanobatwa kwemakore.
Kuchinja kwehupenyu kunokanganisa!
Kuchinja maitiro kunowanzotanga zviratidzo zvekutanga zvekushungurudzwa kwepabonde. Izvozvo hazvirevi kuti humwe hutsika huri huseve hunoenderana nekushungurudzwa kwepabonde. Saizvozvowo, kutsamwa neshamwari, kupinda muchikoro kana kurasikirwa kwevanhu vepedyo kunogona kukonzera kuchinja uku mune mufambiro. Uyewo, mamwe maitiro ekudzidza uye matanho ekufambira mberi anowanzokonzera kukanganisa kwenguva pfupi.
Kunyatsocherechedza kunowanzopa ruzivo, asi mumwe haafaniri kukanganwa kuti mwana wese anotarisira kushungurudzika zvakasiyana maererano nehutano, makore, mutambudzi uye mutemo. Zvinonyanya kukosha: Kunyanya kusakanganiswa kunowedzera, kunyanya kunetseka kunomesa!
Kuzvidzora muhutano hwehutano hwemaitiro
Zvimwe zviratidzo zvinonyanya kushungurudza uye zvinofanira kutarisa vabereki. Izvi zvinosanganisira kunyanya vacheche: hope zvinetso uye rakawedzera panowanikwa kurota zvinotyisa, bedwetting kana bowel kufamba pashure mazhinji Saubersein, kutya zvitsva kana phobias zvavo, whiny maitiro, regression kune jee maitiro kuti mwana akatopiwa kuchengetwa (somuenzaniso, thumbs anomwa, mwana nehurukuro) zvakawedzera kudikanwa kuchengeteka, kurasikirwa kudya kana zvishuvo, kushaya vachionana, kutya evanhu ukama, mumusiye munyika wayo, nevamwe kufarira zvitunha vamwe vana uye vakuru, iri rinokosha inoratidzawo iri mutambo (mabasa zvepabonde zvinowanzotaurwa kuchinjwa mutambo kana nyaya yemutambo), kurasikirwa kwechido mune zvinhu zvakanaka zvakare.
In vana vakura kazhinji vane dzimwe abnormalities anowedzerwa, izvo ingabva kushandiswa kwezvinodhaka pamusoro mhosva, mwoyo, kuzviuraya, zvirwere zvokudya kune vasanyanye chikoro unongotaura. Kazhinji vana vaduku vakadaro vanoratidzirawo unhu hwepabonde hwakashata.
Zviratidzo zvepanyama zvekushungurudzwa pabonde
Mukuwedzera kune zvataurwa pamusoro apa maitiro anowanzoita zviratidzo zvepanyama, izvo chete asi kazhinji hazvipi kupa humwe hunopupu hunokwana hwekushungurudzwa kwepabonde. Kakawanda vanova vanofungira chete maererano nekunetseka kwepfungwa. Abdominal marwadzo, dumbu marwadzo, kupwanywa, ropa riri weti (nokuti dundira zvirwere) kana bowel kufamba (by mumagaro fistulas) angava kukuvadzwa uye zvakawanda kana zvishoma chaanopomerwa zvakasikwa, asi kazhinji zviratidzo pabonde. Kuti zvinhu zvinosanganisira kurwadziwa kuzasi, kakawanda kuvaviwa, abdominal makuvaro, zvirwere zvinotapuriranwa pabonde kune pamuviri pasingadiwi.
Kushungurudzwa kwepabonde kunogona kuonekwa kana mwana achitaura munhu mukuru, kana kuti ikozvino inoratidza zviratidzo zvinoratidza uye vabereki vanofungira uye vanotanga kuongorora.
Kushaya simba kunowanzotevera kushamiswa! Chii zvino? Ndinoenda mberi sei kunodzivirira mwana wangu uye kuranga mutadzi? Kana mwana wacho akanyanyisa pamusoro pehurukuro yacho, inowanzove yakanyora kana ichiita zvidimbu. Pane zviratidzo zvakawanda zvinoratidza kushungurudzwa kwepabonde uye zvakatsanangurwa kune imwe nzvimbo.
Zvakakosha kutora mwana zvakanyanyisa kana zvinoreva kushungurudzwa. Muzviitiko zvishomanana vana vanofunga zvinhu zvakadaro. Saka vanotora mazano ose zvakakomba, zvisinei zvisina kujeka uye akavharidzirwa zvingadaro.
Zviratidzo zvekushungurudzwa kwepabonde kwemwana
Kuita kuti zvinhu zviwedzere kuipa, kuti vana kazhinji havatauri nokuti mutambudzi anouya kubva kumhepo yakapoteredza, kazhinji kunyange kubva kumhuri yavo! Izvozvo zvinogona kuva nguva huru yekudzivirira vana!
Ramba wakadzikama uye usimbise mwana!
Ramba wakadzikama, kunyange kana zvakaoma. Mwana ari mumamiriro ezvinhu apo anonzwa asina chaanoziva, achinetseka uye ane mhosva. Hazvisi zvisiri izvo ndezvakaipa kune avo vanozvidza mwana.
Zvakakosha kuwana rubatsiro rwemhizha nekukurumidza sezvinobvira. Vanokwanisa kunyaradza, kusimbisa, kuchengetedza nekubata mwana wenyu, asi vanongorori vepfungwa chete nevadzidzisi vanodzidziswa kubata chirwere chepfungwa chinoshandiswa kushandiswa mashizha. Vanobatsirawo vabereki zviri nani kutarisana nekushungurudzwa kwepabonde kwevana vavo uye vanogona kutarisana nemamiriro ezvinhu akaoma uye maitiro ekubata navo.
Somubereki, unogona kubatsira mwana kuburikidza nechiitiro chinogara chichigoneka. Kunyange kana ichiita sechinhu chisingaiti uye chisina kunaka, tsika inopawo kuchengeteka uye inobatsira mwana kugadzirisa zvinetso zvinotyisa.
Dzimwe nguva inotanga nekufungira kunetseka kuti nokukurumidza kunomesa. Kana mwana wacho asingatauri nezvekushungurudzwa kwepabonde pachake, haufaniri kuuputira nemibvunzo yakananga, nokuti zvimwe zvingave kuti mwana wacho anogumisa zvachose.
Regai ndikuudzei kuti mwana pamusoro zuva rake, zvose zvinopfuura zvenguva, uye nyatsoteerera kana anotaura zvachero pamusoro zvisingafadzi zviitiko. Vamwe kumbobvira - chaizvoizvo kumbobvira - mwana kushorwa kuti Mashoko: "Asi anofanira kuti iwe wakanga ipapa achiti" Kana zvakaipa: "Nei iwe kurega pachako nokuti rawa" uye "ndinodawo panzvimbo yako ... "
Mashoko akadaro anowedzera kukurudzira mhosva yemwana uye inonzwa yakaipisisa pashure. Zvinotadzisa mwana kunyanya kushinga kuti atorese kushungurudzwa. Kana wakadzoka kubva pakushamiswa kwekutanga, iwe unofanirwa, sezvakataurwa pamusoro apa, bvunza vashandi vakananga kuti vabatsirwe. Muzviitiko zvakawanda, izvi zvinosanganisira mapurisa, nokuti kushungurudzwa kwevana chinhu chakakomba chakakomba chinofanirwa kurangwa kuchengetedza vamwe vana kubva kune uyu mutambudzi. Nzira uye sei apo mapurisa anobatanidzwa anofanira kuitwa kuitira kuti mwana abatsirwe nekukurukurirana nevanofunga nezvepfungwa.
Kudzivirirwa pakusana kwezuva nemigumisiro yaro
Zvimwe zvipfeko zvepanyama - kudzivirira kubva kune zuva
Kutsigira chikamu | dzidzo
Ongororo pamwe nevana | Education ...
Rudo rwekutanga rukuru | dzidzo